Davos: Topimaso sy Fandraisana Anjara Amin’ny Alàlan’ny Lahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2018 16:49 GMT
IMG_0092 avy amin'i aymlis
Hatao ny 23 Janoary ka hatramin’ny 27 Janoary any Davos, ao Soisa, ny fihaonambe fanaon'ny World Economic Forum (Zaikabe momba ny Toekarena Eran-tany) hivorian'ny mpitarika ara-pôlitika sy ara-barotra. Afaka mandray anjara amin'ity zaikabe ity ny olon-tsotra amin’ity taona ity, amin'ny alàlan'ny fandrosoana ny heviny mba hahatonga ny tontolo ho toerana tsara kokoa ary amin'ny famoahana izany ao amin'ny tranonkala fifampizarana lahatsarin'i YouTube.
Tsy ny fijerena ireo sehatra fifanakalozan-dresaka amin'ny webcasts fotsiny ihany no azon’ireo olona manerana izao tontolo izao atao amin'ity taona ity, fa afaka maneho ny heviny ihany koa izy ireo ary ho hita sy ren'ny mpitondra manerana izao tontolo izao izany amin'ny alàlan'ny famoahana lahatsary ety anaty aterineto. Nandefa ny fanasàny tamin'ny alàlan'ny horonantsary sy lahatsoratra tao amin'ny fantsona Youtube ireo mpikarakara ny Diniky ny World Economic Forum ao Davos:
Nanomboka ny Fivoriana Fanao Isan-taona, ary efa nivondrona tao amin'ny faritry ny YouTube misy ny Ivon’ny Kôngresy ireo mpitarika izao tontolo izao mba hijery sy hamaly ireo lahatsary izay nalefan’ny maro taminareo.
Ary mbola tsy tara raha izao ianao no miditra ao amin’ny Dinika ao Davos. Mbola azonao atao ny mandefa lahatsary mamaly Ny fanontaniana ao Davos:
“Raha ny hevitrao dia inona no zavatra iray tsy maintsy ataon’ny firenena, orinasa na olon-tsotra mba hahatonga izao tontolo izao ho tsara kokoa amin'ny 2008?”
Halefa amin’ny sehatra famoriam-bahoaka voafantina ny sasany amin'ireo lahatsarinareo (Ny 23-27 Janoary). Hanohy hijery ny lahatsarinareo ireo mpitarika izao tontolo izao ary hamaly manokana izany.
Efa misy lahatsary maherin'ny 600 misy ny marika “davos question” nampiakarina tao amin'ny Youtube, lahatsary 115 kosa an'ireo mpitarika izao tontolo izao sy ireo mpandray anjara ao Davos namaly ilay fanontaniana, ary 183 ireo mpampiasa Youtube nandefa lahatsary tao amin'ny fantsony.
Samy namaly daholo na olon-tsotra na fikambanana tsy miankina, ary tao ny nandefa lahatsary mifototra amin'ny lahatsoratra sy feo fotsiny miaraka aminy, ao ny miseho tava manoloana ny kamerà, ao ny ampahan-dahatsary namboarina misy zana-dohateny. Nanome hevitra iray farafahakeliny izy rehetra mba hanampy amin’ny fanovàna ity tontolo ity ho toerana tsara kokoa, ary nisafidy lahatsary vitsivitsy tamin’ireo nalefanà mpampiasa Youtube avy amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana aho.
Ity iray ity ohatra, nalefan'i overseasdevelopment1:
Manolotra ny valinteniny ho an'ny Fanontaniana ao Davos i Fletcher Tembo, avy ao amin'ny Ivontoerana Fampandrosoana Ny Ampitan-dranomasina, miresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fanohanana ny feon'ireo olompirenena maneran-tany.
Ny sasany miresaka momba ny fanatsaràna ny fampianarana amin'ny fampiasàna fitaovana an-tserasera, toy ilay Iraniana, cyberpejman.
https://www.youtube.com/watch?v=469yvl_zeGw&rel=1 (fanamarihana: rohy tapaka)
Ity zazavavy Bangladesy ity kosa, Noor Akhter, dia miresaka amin'ny alàlan'ny brac.net – ezaka ataon'i Bangladesy ho fanalefahana ny fahantrana – momba ny miralenta sy ny maha-zava-dehibe ny fananan'ny ankizivavy toa azy manerana izao tontolo izao zo hitovy amin'ny ankizilahy eo amin'ny asa, ny fampianarana ary ny fahafahana:
Ary avy ao Arzanrina, manome ny heviny momba ireo dingana roa azontsika atao mba hahatonga izao tontolo izao ho toerana tsara kokoa i Tomás Alejandro: Ampiana bebe kokoa i Afrika ary atsahatra ny ady.
Mbola santionany kely fotsiny ireo, maro ireo lahatsary hafa nampiakarin'ny olona an-jatony manana hevitra mahatalanjona ao amin'ny fantsona thedavosquestion ao amin'ny Youtube. Aseho any Davos ao anaty efitrano manokana izay ahafahan'ny mpandray anjara ao Soisa mamela ny valinteniny ireo lahatsary ireo, ary efa mitatitra ny valiny an-dahatsary nalefan’ny mpitarika maneran-tany araka ny heviny ireo bilaogera.